I-Intel Hunt Showdown Hack 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Intel Ukuzingela: Ukubonisa uHacky
Ukufumana ukufikelela ekuzingeleni kwethu: Showdown Intel kugula usuku-1 uze ubone oko kufuneka sinikele.
Ukuba uziva ngathi uza kudinga ixesha elide ngelixa ukopela, unokuhlala uthenga isitshixo semveliso yeveki e-1!
Sebenzisa ukuzingela kwethu: Ukubonisa i-Intel kugula ixesha elide njengoko ungathanda! Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje.
Ukuzingela: Umboniso oza kuvavanya (kunye nabahlobo bakho ukuba kufanelekile!) Ngeendlela ezininzi, njengoko ingengawo amaqela aphikisayo ekufuneka ujonge kuwo. Thatha zombini izilwanyana kunye nabanye abadlali ngaphandle kokuxhalaba usebenzisa iHunt yethu: Ukubonakaliswa kwe-Showdown!
Ukuzingela: Ukubonisa ulwazi nge-Intel ngolwazi
Ukufumana ukufikelela kuzo zonke izinto ezidumileyo ezifumaneka kwiHunt: Shownown Hack kanye apha kwiGamePron! Iphuhlisiwe ukuba isetyenziswe koomatshini abasekwe kwi-Intel, sisixhobo esixhasa Windows 10 kwaye iza ngesiNgesi kuphela. Nangona i-HWID itshixiwe, iza ne-HWID Spoofer ukunqanda ukuvalwa kwangaphambili! Inika ukubonwa okubalaseleyo: Showdown Aimbot, kunye neehacks ezibonakalayo ezibonakalayo ngohlobo lwe-Item kunye ne-Enemy ESP. Ngokubekwa phambili kwamathambo, ukuJongana nokuGudileyo, kunye noQeqesho oluLungelelanisiweyo lwe-FOV, ufumana ithuba lokwenza ngokwezifiso amava akho okuqhekeza xa usebenza neGamePron.
Ukuzingela kwethu: Umboniso we-Intel Aimbot ikuvumela ukuba uqwalasele isixhobo ngeendlela ezininzi, ukuvumela ukuba uzenzele iindlela zakho zokukopela. Inqaku le-ESP linokuhluzwa ukubonisa izinto ezithile / abadlali, ukuvumela abasebenzisi beMidlalo yePron ukuba bafunde ngakumbi ngokujolisa kwabo ngokulula.
Utshaba i-ESP (iqwalaselwe kakuhle, amathambo)
Ulwazi lutshaba (Ukujonga ukufa, umgama, iigrunts, ukubulala, izigcawu, iidemoni zamanzi, iiMeatheads, iiImmolators, iiLeeches, iiHell hound, iiButcher)
Into ESP (Eqwalaselweyo kakhulu, Imigibe yebhere, imikhondo, iibhokisi zonikezelo (i-ammo, impilo, izinto), izixhobo ze-melee, izixhobo ezinokuphoswa (izibane njlnjl.), Izinto ezinokuqhuma , izixhobo zekhreyithi, ezitsala, ioyile, amanqaku okutsala.)
Eyona nto inokuqwalaselwa kakuhle yiAimbot
I-FOV ehlengahlengiswayo kunye nokuTyibilika kwabantu
Cwangcisa isikhethi samathambo
Uqwalaselo lweenjongo ezininzi
Izixhobo ze-Hardware ezilingisiweyo ze-aimbot (zikhuselekile kakhulu!)
Umsebenzi kubo bonke abalinganiswa kunye neeNPC!
Akukho kusasazwa (ngepesenti isilayida)
Malunga nokuzingela: Ukubonisa i-Intel
Umdlalo wePron uza kulungiselela abasebenzisi bethu nanini na kunokwenzeka, njengoko kuphela kwenjongo anokuba nayo nawuphi na umphuhlisi ofanelekileyo. Siye saqinisekisa ukuba le cheat kulula ukuyisebenzisa, nangona kubalulekile ukukhumbula ukuba obu buqhetseba bungaphakathi. Unga nokuba ungasasaza ngelixa usebenzisa obu buqhetseba, njengoko sinikezela ngenketho yeStreamproof ekuvumela ukuba usebenzise isixhobo ngaphandle kokuvumela ababukeli bakho ukuba bayakopela! Sesona sixhobo silungileyo sokugcina ukonwatyiswa ngabalandeli bakho, kwaye ikwalungele xa ufuna ukuphumelela imidlalo embalwa kunesiqhelo.
Kutheni usebenzisa uHunt: Showdown Intel ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Isizathu sokuba usithande esi sixhobo kunabanye kulula, njengoko sinika okuninzi ngakumbi xa kuziwa kumgangatho osondeleyo. Kusenokwenzeka ukuba usebenzisa izixhobo zokungabikho ezingenabuninzi beempawu onokuthi usebenze nazo, kodwa ayingombandela nge GamePron. Inyaniso yokuba usebenzisa umatshini osekwe kwi-Intel ikwathetha ukuba uyakufuna ukuhambelana, kwaye ngombulelo, uyifumene. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa inkxaso yethu yabathengi ayinakuthelekiswa nayo! I-HWID Spoofer ibandakanyiwe nesixhobo ngokunjalo, ke akukho sizathu sakuxhalaba malunga nantoni na oyithathileyo ngaphambili nge GamePron!
Ngaphandle kwemenyu efanelekileyo yomdlalo, akukho nto ingako onokuyenza xa kuziwa ekukopeni. Kuya kufuneka wenze uhlengahlengiso kubhabho kwiimeko ezininzi, yiyo loo nto imenyu yethu yomdlalo ibaluleke kakhulu ukuba uyiqwalasele. Ngaphandle kwayo, ngekhe ukwazi ukwenza utshintsho olufunekayo ukukubeka kwindawo yokuphumelela. Awunyanzelekanga ukuba ulayishe nje uHunt: Showdown Intel Hack kwaye uthandaze ukuba useto lwesiseko lusebenzele wena! Ngokusebenzisa i-GamePron ujonge kwilizwe lokukhohlisa (kunye nokusebenza) kuyo yonke imidlalo oyithandayo, nokuba unexesha elingakanani ukopela.
Nangona zikhona iindlela zokuphucula izakhono zakho ngokwendalo, usebenzisa i-Intel Hunt: Umboniso yeyona ndlela ilula onokuthi uyiqwalasele xa kufikwa ekuphumeleleni ngoku. Awusayi kuphinda ukhuphisane nabanye abadlali, njengoko sele usenzile isixhobo, umdlalo sele uphelile.
Ilindelwe Lawula kunye Hunt yethu: Showdown Intel lomnqweno yimfumba?